A Sneak Peak paMusango Shiri Dzisingagumi | Martech Zone
Chitatu, September 12, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nemaawa makumi matanhatu emaawa kubasa kumavhiki mashoma apfuura, zvave zvichinetsa kuwedzera mamwe makumi maviri kana makumi matatu pachirongwa chekumira chandiri kuitira Wild Birds Unlimited. Mangwana izuva rakakura, zvakadaro, apo WBU inoratidza mashandiro acho kune mamwe emafranchisees ayo.
Isu takanyatsosvina mashandiro mazhinji mune ino saiti, uye tinovimba kuita zvakawanda. Iko kune yakasimba Administrative yekumashure-kumagumo uko zvitoro zvinogona kunyange kugadzirisa yavo pachavo ruzivo kana tweak yavo yenzvimbo nzvimbo. Zvimwe zvinhu:
GeoIP localization iyo inosarudza kuti kana kwete kuratidza mune metric kana standard. Iyo GeoIP inofanotaura nzvimbo yako nedunhu uye zvinokurongera pamepu zvichibva kukero ye IP iri kukumbira peji.
Iwo windows windows ari mubatanidzwa. Ukabaya pamepu, vanobva kuKML faira. Kana iwe ukabaya pane nzvimbo dziri padivi repadivi, ivo vanoisa mune yakaturikidzana inoenderana nemepu.
Mirayiridzo inosanganisirwa, kana iwe ukapa yakawanda yekero pane kungori dunhu kana dunhu. Ino inguva yekutanga ini kuendesa maGoogle Directions, asi zvakanaka kwazvo. Chinhu chimwe chete chekucherechedza… Ini handidi kupfuudza ma kero ku geocode, ini ndinongowedzera iyo chaiyo latitude uye longitude uye ndinozvivhara nezita (Pano @ 43, -120).
Mifananidzo yakatogoneswa pama info windows, asi isu hatina mifananidzo yakachengetedzwa panguva ino. 🙂 Nhanho imwe panguva. Kana iwe uchida kutarisa, unogona kushanya Shiri Dzesango Mamepu Asingagumi. Ndingataura kuti software ndiAlfa yakagadzirira kuenda Beta kana tangogamuchira zvikumbiro zvekunatsiridzwa kubva kumutengi.
Kunyanya kuonga kuna Stephen, anga ari mudzidzi wangu pane izvi uye aita basa rakakura. Akatamira kuGerman kwegore rechikoro asi ini ndinotarisira kuramba ndichiendesa kodhi naye pachirongwa ichi. WBU isangano rinonakidza uye anga ari mufaro kushanda nawo. Tiri kutarisira kupfuudza-pamusoro peichi chirongwa sezvo isu tinotarisira kuendesa iyi kunyorera kune mamwe masangano anotsvaga PHP Mapping application. Stefano achave bhizinesi shamwari yangu… hazvina kushata kumukomana achiri kuchikoro chesekondari!
Zvimwe zvekuwedzera zviwanikwa zvave zvaMike kodhi mienzaniso pamwe naBen, mushambadzi ane Rarebird uyo akavaka kuita kunoshamisa kweGoogle Mepu pa Kufanirwa.
Tags: mirayirogoogle mamepu apinzvimbo inemapchitoro muwanistore store locator
Mutete pane iPhone?
Sep 13, 2007 pa 5: 03 AM
Mhoroi ipapo Doug - makorokoto kwamuri uye kune vamwe vanogadzira nekupedzisa chirongwa ichi - Ndine chokwadi chekuti varidzi vezvitoro zveWBU vachakoshesa izvi. Vazhinji uye vazhinji vevatengi vavo (uye vangangove varidzi vezvitoro vanofarira kutenga franchise) vanowana Wild Birds Unlimited kuburikidza neWebhu, zvichiita kuti zvive zvakakosha kuti ruzivo rwavo rwekutanga nekambani rwuve rwakanaka. Iyo nyowani mepu yekumisikidza chokwadi ndeye kusimudzira pamusoro peakambomira static mamapu. Ndinovimba izvi zvinogadzira bhizinesi idzva rako - basa rakakura zvakare.
Sep 13, 2007 pa 9: 21 AM
Ichi chokwadi chiri kutanga kuenda mukuzara kuzere. Ndatenda nekundiparadzanisa nazvo. Nguva dzose zvinofadza.
Sep 13, 2007 na9: 06 PM
Ini handikwanise kukuudza mashamisirwo akaitwa maWild Birds Unlimited franchisees vaive vakawana sneak peak yeiyi nhasi! Izvo zvaive zvisiri pamutemo pachirongwa chedu asi ndakakumbira maminetsi mashoma kutanga kwezuva kuti ndiratidze. Vakabva vangoona kuvandudzwa kunoshamisa pamusoro penzvimbo yedu yezvino chitoro. Ivo vainyanya kufara nechairo chinongedzo mashandiro.
Doug, wanga uri mufaro kushanda naizvo zvakare. Chero ani kunze uko arikutsvaga ane tarenda, akazvipira uye mutengi anotarisana nevatengi haakwanise kuenda zvisirizvo newe! Kutenda nebasa rose rakaoma uye nekutenda kuchikwata chako. Imi varume muri kundiita kuti ndive akanaka.
Mari yezvikamu Wild Birds Unlimited, Inc.